Top 3 Uhambo olugqwesileyo lokuya koololiwe ukusuka eLondon | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Top 3 Uhambo olugqwesileyo lokuya koololiwe ukusuka eLondon
Qeqesha ukuhamba iBritane, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 22/11/2021)
IUK. I-capital ipakisha into eninzi eyonwabisayo kubahambi kunye nabemi ngokufanayo. Ukusuka kwiBig Ben kunye neLondon Eye ukuya eWestminster Abbey naseBuckingham Palace – Zininzi iindawo zokutyelela eLondon. Kukwakho nesakhiwo esicacileyo, ubomi bobusuku obuqaqambileyo, kunye nokutya okumnandi. kunjalo, into abantu abaninzi bahlala beyilibala kukuba iLondon ikwayindawo yokuphosa ilitye kude nohambo oluninzi uhambo ngololiwe iindawo zokuya eU.K. yaye Europe.
Nokuba ufuna ukubaleka imozulu emdaka yaseLondon kwaye ugcakamele ilanga okanye ungene kwindawo yokudibana nembali, uya kufumana iindawo ezininzi zokuya eLondon. Elona candelo lilungileyo kukuba akufuneki ulwe nemigca yokukhangela ukhuseleko olude kwisikhululo seenqwelomoya. kunokuba, unokukhetha ngokulula indawo oya kuyo kwaye utsibe kuloliwe ukusuka kwesinye sezikhululo ezininzi eLondon. Nazi ke 3 Best Train Uhambo lokuya ukusuka eLondon.
Umtsalane womlingo wokukhwela uloliwe
Nokuba undwendwela eLondon iintsuku ezimbalwa okanye uhlale esixekweni ixesha elide njengoko unokukhumbula, ukuthatha a train ride inokutshintsha imbono yakho malunga nesixeko. Ngaphaya komfanekiso wemetropolis yedolophu, ILondon ijikelezwe ziindwendwe ezininzi Iilali ezintle, iidolophu zeekholeji, esimhlophe, needolophu ezisembalini.
Zonke ezi ndawo zifikeleleka ngokulula ngololiwe osuka eLondon, kwaye ayiyi kukuthatha ngaphezu kweeyure ezimbalwa ukufikelela. Ukukhwela uloliwe osuka eLondon lelinye lawona mava abalulekileyo IsiNgesi uya kungqina.
Kodwa elona candelo lihle malunga nohambo lukaloliwe olusuka eLondon asiyiyo indawo. Uhambo olude lweyure lukunika umbono wendawo yasemaphandleni yaseYurophu egcwele iinqaba zase rustic, imithombo yamanzi acocekileyo, neenduli eziqengqelekayo.
ke, ngaphandle kokunye, makhe sijonge kwiinketho zethu zezona ndawo zihamba phambili zikaloliwe ukusuka eLondon.
1. Uhambo olugqwesileyo lokuya koololiwe ukusuka eLondon: Brighton
Ukuba ucinga ngokuthatha uhambo lukaloliwe ukusuka eLondon, IBrighton inokuba yindawo yokuqala eza kuthi qatha engqondweni yakho. Ibonisa ulwandle olucocekileyo lwelitye, iikhefi zehip, iindawo zokutyela ezimnandi, kunye nezitrato ezimxinwa ezijikajikayo, UBrighton unikezela ngekhefu elamkelekileyo kubomi basedolophini obunesiphithiphithi.
Ngaphezu, Idolophu engaselunxwemeni yolwandle ilikhaya kwiRoyal Pavilion emangalisayo, Ibhotwe elineminyaka engama-200 ubudala elalisakuba yindawo yokubuyela ehlotyeni yeNkosana yaseWales. Eyaziwa ngokuba yi "Gay Capital yaseU.K", I-Brighton ikwalikhaya kuluhlu olunomtsalane lweebhari ezinobuhlobo kunye nomnyhadala omangalisayo wokuzingca kwe-gay..
Emva kokufunxa imitha yelanga eshushu, Ukuhamba phantsi kwizitrato zeBrighton ezithandekayo kuya kukuvumela ukuba ufumane icala elitsha lesixeko. Iindlela ezimxinwa zifakwe kwiivenkile zezikhumbuzo zakudala, iivenkile zeerekhodi zevinyl, kunye neegalari zobugcisa ezinomtsalane.
Ungalibali ukumisa ikomityi yekofu kwenye yeevenkile ezityebileyo ezinezi zitrato. Okanye unokuyonwabela ipinti ehlaziyayo kwenye yezitiya zebhiya. kwakhona, hlala ujonge ezinye zezona sampuli zibalaseleyo zoyilo lwenkulungwane ye-16.
Ezinye izinto ezinomtsalane eBrighton ziquka iPreston Park Rockery, eyona gadi inkulu yamatye eU.K, kunye neBrighton Palace Pier eqaqambileyo. Yinto eninzi yokuphatha abahamba solo njengoko kunjalo ngeentsapho.
Nokuba ufuna uhambo olukhawulezayo lwemini okanye ukuphumla impelaveki ibalekile ukusuka eLondon, IBrighton lukhetho oluhle kakhulu. Ungalibali ukufunda ngakumbi malunga ne eyona nto ilungileyo yokwenza eBrighton, iUK., ngempelaveki ngelixa ucwangcisa uhambo lwakho.
Ukufikelela eBrighton ngololiwe
Into entle ngeBrighton kukuba ungafikelela esixekweni usuka eLondon malunga neyure nje. Oololiwe abaya eBrighton bahamba qho 10 imizuzu evela kwizikhululo ezahlukeneyo, kubandakanya isikhululo saseLondon Victoria kunye neLondon St. station Pancras.
2. Uhambo olugqwesileyo lokuya koololiwe ukusuka eLondon: Stonehenge kunye neSalisbury
Ngayo iinqaba ephakathi kunye namabhotwe asebukhosini, I-U.K ayinakunqongophala kwezinto ezitsala umdla kwimbali. Kodwa ukuba ufuna amava okuqala okubukela amaphepha encwadi yembali aphile, ukutyelela kwi-Stonehenge kuyimfuneko.
Isakhiwo esikhulu samatye sangaphambi kokubhalwa kwembali, kukholelwa ukuba ngaphezu 5,000 iminyaka ubudala, isaqhubeka ibadida ababhali-mbali nabembi bezinto zakudala ngokufanayo. Abakhenkethi abanakuzinceda kodwa bayazibuza ukuba abakhi bakwazi njani ukurhuqa ezo bloko zikhulu zamatye kwindawo abakuzo ngoku..
Ibekwe ngaphantsi kwe 10 Iikhilomitha ukusuka eSalisbury, Stonehenge luhambo lukaloliwe lwemizuzu engama-90 ukusuka eU.K. ikomkhulu. Uya kufumana iibhasi ezininzi kunye neeteksi kwisikhululo saseSalisbury eziya kukusa kwindawo yembali.
Ngethuba ulapho, ungalibali ukuphonononga ezinye izinto ezikhangayo ukuba ummandla kufuneka unikeze. Oku kubandakanya isangqa esineenkwenkwezi seWoodhenge kunye neentsalela zeendonga zaseDurrington ezingaqondakaliyo..
kwakhona, Luluvo oluhle ukuchitha ixesha kwidolophu eyimbali yaseSalisbury. Yiya kwiCathedral yaseSalisbury yenkulungwane ye-13 kwaye uhambe phantsi kwiCathedral Vala ukuze ubone uElizabethan kunye neVictorian. izimanga yezakhiwo. Sukuzibandakanya kwivenkile yokuthenga eyongezelelweyo kwi-Market Square ngaphambi kokuba uzinze ipayinti yebhiya kwi-cafe enqabileyo..
Ukufikelela kwi-Stonehenge ngololiwe
Thatha uloliwe oya eSalisbury osuka kwisikhululo saseLondon Waterloo. Nje ukuba ufikelele kwisikhululo saseSalisbury, tsibela kwiteksi yabucala okanye ibhasi ukuya kufika e-Stonehenge. Qinisekisa ukuba ubhukisha ukhenketho lwakho lwe-Stonehenge kwangaphambili.
3. Uhambo olugqwesileyo lokuya koololiwe ukusuka eLondon: Cotswolds
Uyazi ukuba indawo ikufanele ukuyindwendwela xa ichongiwe “njengeNdawo yoBubuhle beNdalo obuBalaseleyo”. Neenduli zayo eziluhlaza, izitiya zeentyatyambo ezenziwe ngobuchule, i-honey-stone cottages, kunye neendawo zokuhlala ezintle, I-Cotswolds ngumfanekiso otshicayo welali yesiNgesi yakudala onokuthi uyibone kwiimuvi.
I-Cotswolds yenye yezo ndawo apho ungadingi ukwenza okuninzi ukuze uphumle usuka eLondon.. Izinto ezinomtsalane ezidumileyo kulo mmandla ziquka iBroadway Tower, Burton-on-eManzini, Bibury, kunye neSudeley Castle.
Ukufikelela eCotswolds ngololiwe
Indawo yaseCotswolds ijikelezwe yi-cornucopia yezikhululo zikaloliwe, kuquka iBanbury, Bath, eCheltenham, kunye neMorten-in-Marsh. Eyona ndlela ilungileyo yokufikelela eCotswolds usuka eLondon kukuthatha uloliwe osuka kwisikhululo saseLondon Paddington ukuya eMorten-in-Marsh.. Uhambo lukaloliwe lwemizuzu engama-90 luyakuvuza breathtaking iimboniselo kwilizwe lamaNgesi.
Ngexesha elizayo xa uzifumana unqwenela iholide yokuphumla, musa ukuchitha ixesha elininzi ucwangcisa. kunokuba, khwela kuloliwe ukusuka nakwesiphi na isikhululo saseLondon kwaye ubaleke uye kwenye yezi ndawo zokufikela ezinomfanekiso ogqibeleleyo eU.K.
Thina Gcina A Isitimela uya kukuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo oluya kwezi Phezulu 3 Indawo eziya kuyo ngohambo olugqwesileyo olusuka eLondon.
Ngaba ufuna ukufaka iposti yethu yebhlog “Phezulu 3 Eyona ndawo intle yohambo lukaloliwe olusuka eLondon” kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Fbest-train-trip-destinations-london%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
BestTripDestinations London train Travel uhambo ngololiwe TrainTripLondon